Mareykanka oo saanad milliteri iyo dhaqaaleba ugu deeqaya Soomaaliya. [Akhris …] – Radio Daljir
Mareykanka oo saanad milliteri iyo dhaqaaleba ugu deeqaya Soomaaliya. [Akhris …]
Juunyo 26, 2009 12:00 b 0
Washington, June 26 | Sida ay ku warbixisey xukuumadda Washington Soomaaliya ayaa waxaa uu ka taageerayaa dalka Mareykanka gargaar dhinaca Milliteriga, iyo dhawaalaha ah.
Maamulka Obama ayaa bilaabaya in uu u soo diro dalka Soomaaliya Saanad Milliteri oo lagu taageerayo dawladda Soomaaliya si loo xoojiyo DFKMG, sidoo kale waxaa ay sheegeen Saraakiil ka tirsan maamulka Obama in la sii wadayo gacan siinta daawladda Soomaaliya oo haatan u muuqata mid itaalkeedu uu liito.
Warbixintan oo ay soo saareen saraakiisha Arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ayaa waxaa lagu sheegey in kaalmadan ay sii adkeyneyso jiritaanka Dawladda KMG ee Soomaaliya iyada oo deeqaha iyo gacansiinta Mareykanka ay ahaaneyso mid si joogta ah u jirta.
Sarkaalka ugu sarreeya wasaaradda Arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Mr Ian Kelly ayaa sheegey in xaaladda dalka Soomaaliya ay tahay mid khuseysa Mareykanka Maaddaama xilliga ay ku sii xoogeysanayaan Islaamiyiin minted ah.
Waxaa uu sheegey in Mareykanka uu si aad ah uu uga walaacsanyahay xaaladda ka taagan isla markaana ay amni darrida saammeyn ku yeelanayso waddamada gobolka.
Sidoo kale waxaa jirey taageero dhaqaale oo xukuumadda Mareykanka ay siineyso qeybaha kala duwan ee maamullada dalka Soomaaliyya ka jira Sida DFKMG, Puntland iyo Somaliland, si loo sii xoojiyo loona dar dar geliyo hannaanka nabadda.
Wafdi saddex geesood ah oo iminka ku ku sugan dalka Mareykanka ayaa waxaa ay kala kulmeen saraakiisha sar sare ee dalka Mareykanka sidii dalka loo xasilin lahaa iyada oo lagu hawl galayo taageero waddamada Caalamka laga helo gaar ahaan Mareykanka.
Islaamiyiinta Soomaaliya gaar ahaan Al Shabaab iyo Xisbul Islaam ayaa waxaa ay ku sii baahayaan oo ay ku sii xoogeysanayaan koonfurta dalka Soomaaliya, waxaana ay tallaabadaasi ay noqotey mid walaac baahsansan ku abuurtey waddamada Caalamka, waxaana ay u muuqdaa kooxda Al Shabaab iyo Xisbul Islaam kuwo ka awood badan dawladda Soomaalya.
Xukuumada Puntland oo sheegtay in dawlada Somaliya ay xaq u leedahay in ay ciidamo dalbato, loose baahan yahay ciidan qaran oo amniga suga. Dhegaysi …